Infographics Ahịa | Peeji nke 256 nke 256 Martech Zone
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ọ bụ nnukwu bumping n'ime John Uhri nke Red Bit Blue Bit na Blog Indiana, afọ a. John na-eme ihe dị mma - kama ide ihe ederede n'oge mkparịta ụka, ọ na-adọta ndị na-ese ihe ọmụma (ihe ọmụma). Yabụ, nke a bụ nnukwu infographic nke Corporate Blogging for Dummies nke o mere mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ ahụ (pịa ka ibudata nha zuru oke)! Daalụ John! Ọ dị mma ịhụ ihe ngosipụta dịka nke a ebe ọ na-atụnyere ya
Ịgụ Oge: <1 nkeji Infographics anọwo na nwa oge mana ọ dịbeghị anya ọ ghọrọ oke iwe niile. Site na saịtị dịka Digg na-anwụ anwụ, ndị na-ere ahịa na-achọ ị nweta iju mmiri nke okporo ụzọ na saịtị ha na-etinye ihe osise na-enye nkọwa na-akọ akụkọ dị ukwuu. Ruo ọtụtụ puku dollar, ịnwere ike ị nweta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ihe ọmụma iji mepụta ngosipụta ihe ngosi dị elu nke na-akọwapụta nsogbu na nlele. Companylọ ọrụ Infographic ga-eme nyocha na imewe ahụ. Fọdụ
Ịgụ Oge: 2 nkeji Mba, nke a abụghị otu n'ime mkpasu iwe ahụ Nweta ndị ọzọ na-agbachitere iji mepụta ihe ị na-eso na Twitter na ndị na-eso ụzọ adịghị mkpa. Nke a bụ otu ị ga - esi bulie olu gị na Twitter nke mere na ndị na - egeghị gị ntị na - ahụ gị tweets. A na-akpọ azịza hashtag. Enwere ọtụtụ mmadụ na mmemme na-achọ Twitter ugbu a maka ozi oge na ihe omume na-achọ hashtags. Hashtag bụ paụnd
← Nke gara aga 1 ... 255 256
Page 256 nke 256